Home » Vaovao momba ny fiaramanidina » Programme flyer tsara indrindra 2021 antsoina hoe
Ny ambaratongan'ny programa flyer matetika tsara indrindra dia niova kely hatramin'ny nanombohan'ny valanaretina coronavirus
Ny fitahirizana sidina dia ho zava-dehibe kokoa amin'ny volana ho avy
Tsy tokony hieritreritra ny mpandeha fa afaka maka ny toerana nialany fotsiny
Ny kaompaniam-pitaterana an'habakabaka lehibe dia manome lanja valisoa bebe kokoa amin'ny fanandramana hitaomana ny olona hiverina amin'ny fiaramanidiny
Miaraka amin'ny fitsangantsanganana an-habakabaka amerikana andrasana hiverina amin'ny 2021, satria miahiahy ny coronavirus ary mihabetsaka ny faritra misokatra ho an'ny orinasa, ny fitahirizana sidina dia ho zava-dehibe kokoa amin'ny volana ho avy.
Mba hanampiana ireo mpandeha handray fanapahan-kevitra tsara indrindra ho an'ny poketran'izy ireo, dia namoaka tatitra momba ny fandaharana Flyer Frequent Flyer Program tsara indrindra tamin'ny 2021, izay mitana ny laharam-pitaterana an'habakabaka 10 lehibe indrindra mifototra amin'ny metrika manan-danja 21, manomboka amin'ny sandan'ny isa / kilometatra ka hatramin'ny daty fahatapahana ho an'ny valisoa sidina.
United MileagePlus no programa flyer matetika tsara indrindra amin'ny 2021, mamarana ny dingana maharitra dimy taona ho an'ny Delta SkyMiles ambonin'ireo filaharana.
Ny programa antonony valisoa an'habakabaka dia manome flyers 11% matetika amin'ny fandaniam-bolan'ny sidina, ary afaka mandray anjara daholo ireo programa ireo.
Hawaiian Airlines dia manome ny sanda valisoa betsaka indrindra amin'ny dolara laniana, arahin'ny Frontier Airlines.
Dimy amin'ireo kaompaniam-pitaterana an'habakabaka 10 lehibe indrindra no manome valisoa bebe kokoa amin'ny 2021 noho ny tamin'ny 2020, mamy ny vilany amin'ny 30% eo ho eo.
Ny karatra Premier Citi sy ny Citi / AAdvantage Platinum Select World Elite Mastercard no karatra indram-piaramanidina tsara indrindra 2021.
Samy hafa ve ny programa flyer matetika tsara kokoa noho ny talohan'ny areti-mandringana?
Ny ambaratongan'ny programa flyer matetika tsara indrindra dia niova kely hatramin'ny nanombohan'ny valanaretina coronavirus, ka tsy tokony hieritreritra ireo mpandeha fa afaka maka ny toerana nijanonany fotsiny. Ny fiovana lehibe indrindra dia ny United MileagePlus manala ny Delta SkyMiles ho fandaharana ambony indrindra, mamarana ny fihazakazahan'i Delta mandritra ny dimy taona eo amin'ny laharana. Ny kaompaniam-pitaterana an'habakabaka lehibe dia manome valisoa valisoa bebe kokoa amin'ny fanandramana hitaomana ny olona hiverina amin'ny fiaramanidiny. Dimy amin'ireo mpitatitra lehibe indrindra 10 no nampitombo ny sanda valisoa azony - 30% ny salan'isa.
Sazy ve ny olona noho ny tsy fisidihany amin'ny taona 2020?
Ireo flyer matetika dia tsy hosaziana noho ny fijanonany amin'ny tany noho ny COVID-19. Ny ankamaroan'ny programa flyer matetika dia nanitsy ny politikany hanomezana fotoana fanampiny ny olona hahafeno ny fepetra takiana amin'ny elite. Ohatra, Delta SkyMiles, American Airlines AAdvantage, ary United MileagePlus dia manitatra ny toeran'ny elite efa hatramin'ny janoary 2022.
Inona avy ireo fomba sasany tsara indrindra hitsitsiana ny saran-dalamby?
Ny fomba tsara indrindra hitsitsiana fiaramanidina dia ny fidirana amin'ny programa flyer tianao indrindra maimaim-poana, izay hamonjy anao 11% amin'ny salan'isa, ary avy eo ny fivarotana fampitahana sidina mialoha ny dia ataonao. Ny fampiasana ny carte de crédit mety hividianana saran-dalamby dia mety ho fomba marani-tsaina ihany koa hamonjy bebe kokoa. Raha mahatoky amin'ny orinasam-pitaterana manokana ianao dia tokony hampiasa ny carte de crédit an'io zotra io. Raha tsy izany, ny carte de crédit amin'ny fitsangatsanganana ankapobeny dia ho fomba tsara kokoa ahazoana sidina maimaimpoana.